စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပညာရေး in အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု USA တွင်ပညာသင်လိုသောကျောင်းသားများအတွက် တက္ကသိုလ် of အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှတဆင့် ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလည်းအဖြစ်လူသိများ, USA တွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကျောင်းသားများအတွက် ပြည်ပမှာလေ့လာမှု in အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပညာရေး in US သို့ လေ့လာချက် in US in တက္ကသိုလ်က of US ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ US ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ US ပညာရေး in အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သို့ လေ့လာချက် in အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု in တက္ကသိုလ်က of အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပညာရေး in California သို့ လေ့လာချက် in California in တက္ကသိုလ်က of California ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ California ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ California ပညာရေး in California သို့ လေ့လာချက် in California in တက္ကသိုလ်က of California ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ California ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ California ပညာရေး in New York သို့ လေ့လာချက် in New York in တက္ကသိုလ်က of New York ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ New York ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ New York ပညာရေး in Austin သို့ လေ့လာချက် in Austin in တက္ကသိုလ်က of Austin ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Austin ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Austin ပညာရေး in ဆန်ဖရန်စစ္စကို သို့ လေ့လာချက် in ဆန်ဖရန်စစ္စကို in တက္ကသိုလ်က of ဆန်ဖရန်စစ္စကို ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ပညာရေး in Denver သို့ လေ့လာချက် in Denver in တက္ကသိုလ်က of Denver ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Denver ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Denver ပညာရေး in အတ္တလန်တာ သို့ လေ့လာချက် in အတ္တလန်တာ in တက္ကသိုလ်က of အတ္တလန်တာ ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ အတ္တလန်တာ ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ အတ္တလန်တာ ပညာရေး in ချီကာဂို သို့ လေ့လာချက် in ချီကာဂို in တက္ကသိုလ်က of ချီကာဂို ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ချီကာဂို ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ ချီကာဂို ပညာရေး in Kansas သို့ လေ့လာချက် in Kansas in တက္ကသိုလ်က of Kansas ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Kansas ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Kansas ပညာရေး in Orlando တွင် သို့ လေ့လာချက် in Orlando တွင် in တက္ကသိုလ်က of Orlando တွင် ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Orlando တွင် ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Orlando တွင် ပညာရေး in Washington သို့ လေ့လာချက် in Washington in တက္ကသိုလ်က of Washington ကပံ့ပိုး အကောင်းဆုံး ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Washington ပေး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဘို့ Washington.
အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ယူအက်စ်အေ | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in US | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in California | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in California | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in New York | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in Austin | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ဆန်ဖရန်စစ္စကို | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in Denver | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in အတ္တလန်တာ | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in ချီကာဂို | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in Kansas | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in Orlando တွင် | အကောင်းဆုံး ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ in Washington
ပညာသင်နှစ် (သြဂုတ်လ - ဇွန်)
အဆိုပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ပြည်နယ် ၅၀ ရှိသောနိုင်ငံသည်မြောက်အမေရိကကိုအပြည့်အ ၀ လွှမ်းခြုံထားသည်။ အနောက်မြောက်ဘက်တွင်အလက်စကာနှင့်ဟာဝိုင်ယီတို့သည်နိုင်ငံ၏ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ရောက်ရှိလာသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလူ ဦး ရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သောအမေရိကန်၊ လူ ဦး ရေ ၃၂၇.၇ သန်းရှိသည့်အမေရိကန်၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောစီးပွားရေးနှင့်အင်အားအကြီးဆုံးစစ်တပ်တို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အမေရိကန်ပညာရေးအစီအစဉ် နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်ရွေးချယ်မှုကြွယ်ဝသောareaရိယာပေးသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကျောင်းသားများပင်လျှင်ကောလိပ်များ၊ သင်တန်းများနှင့်နေရာများစွာရှိသည်။
အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများသည်အဆင့်မြင့်ပညာရေးဒီဂရီများပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လစ်ဘရယ်အနုပညာအဖွဲ့အစည်းများအနုပညာ, လူ့, ဘာသာစကားနှင့်လူမှုရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံအစီအစဉ်များပေး။ လစ်ဘရယ်အနုပညာအများစုကအဖွဲ့အစည်းများပုဂ္ဂလိကဖြစ်ကြသည်။ ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များနှင့်ကောလိပ်များကိုပဒေသာပင်များ၊ ကျောင်းသားဟောင်းများအလှူငွေများ၊ သုတေသနထောက်ပံ့ကြေးများနှင့်ကျူရှင်စရိတ်များပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။
သိရန်လိုအပ်သည် - USA တွင်လေ့လာပါ
USA တွင်လေ့လာပါ ယူအက်စ်အေပညာရေး | ယူအက်စ်အေတွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ
အမေရိကန်တွင်ကျောင်းပိတ်ရက် | ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | Austin အတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | San Francisco မှာပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ဒင်းဗားတွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | အတ္တလန်တာတွင်ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ချီကာဂို၌ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Kansas ရှိပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Orlando တွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | ဝါရှင်တန်ရှိပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ယူအက်စ်ရှိပညာရေး | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေး | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေး | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေး | နယူးယောက်ရှိပညာရေး | Austin အတွက်ပညာရေး | ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေး | ဒင်းဗားပညာရေး | Atlanta ရှိပညာရေး | ချီကာဂိုပညာရေး | Kansas ပြည်နယ်ပညာရေး | Orlando တွင်ပညာရေး | ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေး
အသိအမှတ်ပြုလေးနှစ်ကောလိပ် ၂,၆၁၃ ခုရှိသည် US မှာတက္ကသိုလ်များ၏အစည်းအရုံးအရသိရသည် အမေရိကန်ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များ.
ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိအလယ်တန်းကျောင်းများကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ သုတေသနတက္ကသိုလ်များ၊ ရပ်ရွာကောလိပ်များ၊ အနုပညာကောလိပ်များနှင့်သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျောင်းများ။ ဤကွဲပြားသောကောလိပ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ သင့်အားကမ်းလှမ်းရန်တစ်ခုခုရှိသည်။
ပရိုဂရမ်များကိုဒီဘွဲ့အစီအစဉ်အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုကမ်းလှမ်းရန်“ အဓိက” ဘာသာရပ်နယ်ပယ်များနှင့်လေ့လာမှုနယ်ပယ်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုများပေးရန်“ အဓိက” သင်တန်းများခွဲထားသည်။ ကျယ်ပြန့်သောပညာရေးအတွေ့အကြုံအတွက်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကိုလေ့လာရန်ကျောင်းသားများသည်“ ရွေးချယ်ထားသော” module များကိုယူနိုင်သည်။
တက္ကသိုလ်များသို့တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားရန်လျှောက်လွှာကိုတက္ကသိုလ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှရယူပါ။ သီးခြားလျှောက်လွှာပုံစံကိုတစ်ခုထက်ပိုသောလျှောက်ထားလိုသောကျောင်းသားများကဖြည့်စွက်သင့်သည် ယူနိုက်တက်စတိတ်တက္ကသိုလ်။
အကယ်၍ တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားကသူတို့အရည်အချင်းပေါ် မူတည်၍ လက်ခံလျှင်၊ ကျောင်းသားသည်ကမ်းလှမ်းချက်စာကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ကျောင်းသားများသည်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ၄ င်းတို့၏ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအတည်ပြုရန်ကျောင်းသို့ပြန်ပို့ခြင်းဖြင့်ဤစာအားပြန်လည်ဖြေကြားရန်မျှော်လင့်ရသည်။
ယူအက်စ်တွင်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | ယူအက်စ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | ယူအက်စ်အေရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုစရိတ်
ယူအက်စ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ် | ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ် | နယူးယောက်တွင်နေထိုင်ရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ် | Austin တွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | ဒင်းဗားတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | အတ္တလန်တာတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ချီကာဂို၌နေထိုင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Kansas တွင်နေထိုင်၏ကုန်ကျစရိတ် | Orlando တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ၀ ါရှင်တန်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ယူအက်စ်တွင်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူနေမှုစရိတ်တွက်ချက်မှု | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | နယူးယောက်ရှိလူနေမှုကုန်ကျစရိတ် | Austin တွင်နေထိုင်သောတွက်ချက်မှုနှုန်း | San Francisco ရှိလူနေမှုစရိတ်တွက်ချက်မှု | နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် Denver တွင်နေထိုင်မှုတွက်ချက်မှု | အတ္တလန်တာတွင်နေထိုင်သောတွက်ချက်မှုပုံစံ | ချီကာဂိုရှိလူနေမှုကုန်ကျစရိတ် | Kansas တွင်နေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | Orlando တွင်နေထိုင်သည့်တွက်ချက်မှုနှုန်း | ဝါရှင်တန်ရှိလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်
အဆိုပါ အမေရိကန်ပညာရေးအစီအစဉ် အလွန်ပေါ့ပါးသည်ဟုယူဆရပြီးကျောင်းသူ / သားများသည်ကျောင်းအပ်နှံခြင်း၊ သင်တန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်တာဝန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဆင့်မြင့်မားစွာရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အစီအစဉ်များသည်ဆွေးနွေးမှုကိုအခြေခံသည့်၊ ဆွေးနွေးပွဲပုံစံပို့ချချက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သေးငယ်သောကျောင်းသား၏လိပ်စာသို့မဟုတ်ကွဲပြားသောအကြောင်းအရာများကိုစိန်ခေါ်သည်။
သင်ကြားခြင်း ယူနိုက်တက်စတိတ်အတွက်အခကြေးငွေ အများဆုံးဒီဂရီအစီအစဉ်များအတွက်တစ်နှစ်လျှင် $ 39,890- $ 49,320 ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။
စံ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လူနေမှုကုန်ကျစရိတ် မြို့ကြီးများအတွက်တစ်လလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၀၀ ဖြစ်သည်။
အိပ်ခန်းသုံးခန်းပါသောတိုက်ခန်းငှားရမ်းခမှာတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁,၉၂၀ ခန့်ရှိသည်
လစဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဒ်ပြား / လက်မှတ်ကဒေါ်လာ ၆၅ ကုန်ကျမည်
စျေးသိပ်မကြီးတဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာ ၃ ခေါက်ထမင်းချက်ကိုဒေါ်လာ ၅၀ ၀ န်းကျင်ကျသင့်မှာဖြစ်တယ်
ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ ယူအက်စ်ကျောင်းသားဗီဇာ အမေရိကန်ဗီဇာလျှောက်ထားပါ
လျှောက်ထားသူသည်ဒီဂရီမစတင်မီအနည်းဆုံး (၃) လ ကြိုတင်၍ လျှောက်ထားသင့်ပြီးအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် (DS-3) ။
သင်၏အင်တာဗျူးအပြီးတွင်နောက်ဆုံးဗီဇာမရရှိမှီနောက်ဆုံးလျှောက်လွှာတင်ခြင်းသည် ၈ ပတ်မှ ၁၂ ပတ်အထိကြာနိုင်သည်။
ကျောင်းသားဗီဇာသည်သင်တန်းကာလ + ၂ လအပိုသက်တမ်းရှိသည်
လျှောက်ထားသူများသည်သင်၏ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားသူ၏ဘဏ်အကောင့်တွင်အနည်းဆုံး NaN USD ၏အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေပြသခြင်းအားဖြင့်ဘဏ္supportာရေးအထောက်အပံ့အထောက်အထားကိုတင်ပြသင့်သည် နေပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု.
ယူအက်စ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ယူအက်စ်ရှိကျောင်းသားဗီဇာအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် ယူအက်စ်နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်လေ့လာမှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုပါကအလုပ်ပါမစ်လိုအပ်သည် အမေရိကန်မှာအလုပ်လုပ်။ ကျောင်းသားသည်သင်၏တက္ကသိုလ်သို့မဟုတ်ကျောင်းပြင်ပရှိကျောင်းဝင်း၌အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အချိန်ပြည့်စာရင်းသွင်းထားပါသည် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တက္ကသိုလ်.
လေ့လာရန်ခွင့်ပြုသရွေ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်သည်သက်တမ်းရှိသည်။ ကျောင်းသားသည်တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၂၀ သာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျောင်းသားသည်အားလပ်ရက်များနှင့်ကျောင်းပိတ်ရက်များအတွင်းအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ချင်သောကျောင်းသားများ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အလုပ်လုပ်သည် ကျောင်းပြီးပြီးနောက်နောက်ထပ်အမေရိကန်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းမှာအမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရပြီးနောက် ၃ နှစ်အထိဒီမှာအလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိစည်းမျဉ်းများအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ခန့်ကြာမြင့်သည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၁၀ ဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားသည်တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၄၀ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိသည်။
Form ကိုငါ -765 ဖြည့်;
ပေးဆောင်ထားသော USCIS အခကြေးငွေအထောက်အထား၊
တက္ကသိုလ်မှ I-20 ပုံစံ၊
ငါ -765 ဖြည့်အင်ဖိုထောက်ပံ့သည်အခြားသက်သေအထောက်အထားများ။
ယူအက်စ်တွင်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရန် USA တွင်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားပါ
သို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတက္ကသိုလ်များတွင်လျှောက်ထားကျောင်းသားများသည်တက္ကသိုလ်၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများရှိသင့်သည်။ စိတ် ၀ င်စားသည့်တက္ကသိုလ်၏လျှောက်လွှာပုံစံကိုစနစ်တကျဖြည့်စွက်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ တက္ကသိုလ်များသည်သင့်လျော်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၊ ယခင်အရည်အချင်းများ၊ ဘဏ္informationာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များလိုအပ်သည်။
အချို့သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတက္ကသိုလ်များ လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးအပိုစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်တန်းသည်အထူးပြုမှုအတွက် GRE၊ GMAT သို့မဟုတ် LSAT ကဲ့သို့သောနောက်ထပ်စစ်ဆေးမှုများအတွက်ရမှတ်များလိုအပ်ပါက။ ထိုအခါရမှတ်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီအဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများသည်သက်သေပြရမည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု IELTS, TOEFL သို့မဟုတ် C1 အဆင့်မြင့်ဘာသာစကားလက်မှတ်များပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ရမှတ်များသည်သတ်မှတ်ထားသည့်နိမ့်ဆုံးဘာသာစကားရသင့်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတက္ကသိုလ်များ။
USA တွင်ပညာရေး | ငါတို့တစ်နေရာတည်း USA တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း USA တွင်တက္ကသိုလ် နှင့်အခြား 105 နိုင်ငံများ ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် ယူအက်စ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် နယူးယောက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Austin အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Denver ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် အတ္တလန်တာရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ချီကာဂိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Kansas ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ USA တွင်လေ့လာမှု ဖုံးလွှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခု၊ USA တွင်ပညာရေးအပါအဝင် ယူအက်စ်ရှိပညာရေး | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေး | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေး | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေး | နယူးယောက်ရှိပညာရေး | Austin အတွက်ပညာရေး | ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေး | ဒင်းဗားပညာရေး | Atlanta ရှိပညာရေး | ချီကာဂိုပညာရေး | Kansas ပြည်နယ်ပညာရေး | Orlando တွင်ပညာရေး | ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေး ).
စျေးသက်သာသောစိတ်ကြိုက်ပညာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ များအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ယူအက်စ်အေအတွက် USA ရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်ပရှိထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များ, USA တွင်ထိပ်တန်းသင်တန်းများ, USA ရှိထိပ်တန်း MBA ကောလိပ်များ, USA ရှိထိပ်တန်း MS ကောလိပ်များ, USA ရှိထိပ်တန်း UG စီးပွားရေးကျောင်းများ, USA ရှိထိပ်တန်း MBBS ကောလိပ်များ နှင့် USA တွင်အများအပြားပိုပြီးသင်တန်းများ။
ငါတို့နိုင်ငံရပ်ခြား ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ USA မှာလူသိများတဲ့၊ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, နိုင်ငံခြားပညာရေး ယူအက်စ်မှအတိုင်ပင်ခံ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ယူအက်စ်အေနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ USA တွင်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ပညာသင်ကြားခြင်း * ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများအတွက်အားမပေးပါ အခမဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ယူအက်စ်အေအတွက်တက္ကသိုလ်သည် နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်။
ပွငျလေ့လာမှု USA တွင်
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်လည်းလူသိများတဲ့ \_ t နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်, ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ယူအက်စ်အေနှင့် ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ USA အတွက်
အမေရိကန်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | နယူးယောက်ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | Austin ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Denver ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | အတ္တလန်တာရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | ချီကာဂိုရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Kansas ရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Orlando တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးမှု | ၀ ါရှင်တန်ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | အမေရိကန်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | နယူးယောက်ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | Austin ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Denver ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး | အတ္တလန်တာရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | ချီကာဂိုရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Kansas ရှိစျေးသက်သာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ | Orlando တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးမှု | ၀ ါရှင်တန်ရှိတတ်နိုင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး
ကျောင်းသားတိုင်ပင်ဆွေးနွေး - ပညာရေးအမေရိကန်
ပညာရေးအတွက်စီစဉ် USA တွင်, တက္ကသိုလ်များအတွက်ဝင်ခွင့် USA မှ USA တွင်လေ့လာရန်
သင်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ဘယ်သူလိုအပ်တယ် အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ ဘို့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဘယ်လိုလုပ် ဝန်ခံချက်ရ in အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု in ယူအက်စ်အေရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ USA တွင်ပညာရေး သို့မဟုတ် ယူအက်စ်အေတွင်လေ့လာပါ, US ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ယူအက်စ်ရှိပညာရေး သို့မဟုတ် ယူအက်စ်တွင်လေ့လာသည်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေး သို့မဟုတ် ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်လေ့လာပါ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေး သို့မဟုတ် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်လေ့လာသည်, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေး သို့မဟုတ် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်လေ့လာသည်, နယူးယောက်ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ နယူးယောက်ရှိပညာရေး သို့မဟုတ် နယူးယောက်၌လေ့လာပါ, Austin အတွက်တက္ကသိုလ်များ ဘို့ Austin အတွက်ပညာရေး သို့မဟုတ် Austin တွင်လေ့လာပါ, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေး သို့မဟုတ် San Francisco မှာလေ့လာပါ, ဒင်းဗားတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ဒင်းဗားပညာရေး သို့မဟုတ် ဒင်းဗားတွင်လေ့လာသည်, အတ္တလန်တာရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ Atlanta ရှိပညာရေး သို့မဟုတ် အတ္တလန်တာတွင်လေ့လာပါ, ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ချီကာဂိုပညာရေး သို့မဟုတ် ချီကာဂို၌လေ့လာပါ, Kansas ပြည်နယ်ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ Kansas ပြည်နယ်ပညာရေး သို့မဟုတ် Kansas တွင်လေ့လာပါ, Orlando တွင်တက္ကသိုလ်များ ဘို့ Orlando တွင်ပညာရေး သို့မဟုတ် Orlando တွင်လေ့လာသည်, ဝါရှင်တန်ရှိတက္ကသိုလ်များ ဘို့ ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေး သို့မဟုတ် ဝါရှင်တန်ရှိလေ့လာမှု ကျနော်တို့အပါအဝင်အမေရိကန်နိုင်ငံအဖြစ်နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံယူကြပြီ, US ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , နယူးယောက်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Austin အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဒင်းဗားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , အတ္တလန်တာရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ချီကာဂိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Kansas ပြည်နယ်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Orlando တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဝါရှင်တန်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးပြုနှင့်မိတ်ဖက်စုံလင်အတွက် ယူအက်စ်အေအတွက်အကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအဓိကအားဖြင့် US မှာအကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နယူးယောက်ရှိအကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Austin တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဒင်းဗားအတွက်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, အတ္တလန်တာ၌အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ချီကာဂိုတွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Kansas တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဝါရှင်တန်ရှိအကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် USA တွင်အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များ အပါအဝင် USA တွင်လေ့လာရန် US ရှိတက္ကသိုလ်များ , အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတက္ကသိုလ်များ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတက္ကသိုလ်များ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတက္ကသိုလ်များ , နယူးယောက်ရှိတက္ကသိုလ်များ , Austin အတွက်တက္ကသိုလ်များ , ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိတက္ကသိုလ်များ , ဒင်းဗားတက္ကသိုလ်များ , အတ္တလန်တာရှိတက္ကသိုလ်များ , ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်များ , Kansas ပြည်နယ်ရှိတက္ကသိုလ်များ , Orlando တွင်တက္ကသိုလ်များ , ဝါရှင်တန်ရှိတက္ကသိုလ်များ နှင့်လည်းအတွက်နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနှင့်အတူ 106 နိုင်ငံများ ထောက်ပံ့ရန် ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့ရန်မြို့ကြီး ၃၂၆ ရှိနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များအပါအ ၀ င်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ ယူအက်စ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ယူနိုက်တက်စတိတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , နယူးယောက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , Austin အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ဒင်းဗားအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , အတ္တလန်တာအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ချီကာဂိုအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ , Kansas ပြည်နယ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်အတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်မြို့ပေါင်း ၃၂၆ မြို့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ အော့စတင်းနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ အတ္တလန်တာ၊ ချီကာဂိုအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ၊ ကန်ဆပ်အတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊ အော်လန်ဒိုအတွက်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၊
ယူအက်စ်အေအဘို့အလူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ယူအက်စ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်လူနေမှုစရိတ် အပါအဝင် ယူအက်စ်များအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက် နားလည်ရန် US ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ယူအက်စ်များအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်လူနေမှုစရိတ်, ကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, နယူးယောက်အတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် နယူးယောက်ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်စရိတ်, Austin အတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် Austin အတွက်ကျောင်းသားများအတွက်လူနေမှုစရိတ်, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိကျောင်းသားများအတွက်လူနေမှုစရိတ်, နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် Denver အတွက်ဂဏန်းတွက်စက် နားလည်ရန် ဒင်းဗားရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, အတ္တလန်တာအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် အတ္တလန်တာရှိကျောင်းသားများအတွက်လူနေမှုစရိတ်, ချီကာဂိုအတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ချီကာဂိုရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, Kansas ပြည်နယ်အတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် Kansas ပြည်နယ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, Orlando တွင်နေထိုင်ရန်ဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် Orlando တွင်ရှိသောကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ဝါရှင်တန်အတွက်နေထိုင်မှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ် နားလည်ရန် ဝါရှင်တန်ရှိကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် USA တွင်ပညာရေး နှင့်အကြောင်းပြချက် USA သို့လေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းနှင့်သင်ဆက်သွယ်မည် ယူအက်စ်အေရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ထို့အပြင်ဆိတ်ကွယ်ရာအခြားနိုင်ငံများအကြံပြုအပ်ပါသည် <="" p="">
သင်၏ USA တွင်လေ့လာရန်လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည် ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ယူအက်စ်တွင်ကျောင်းသားသည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည် ဗီဇာ အမေရိကန်အတွက်, အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် USA အတွက်တစ်ချိန်ကသင် USA တွင်ဝင်ခွင့်ရ in USA တွင်တက္ကသိုလ် သို့ ယူအက်စ်အေတွင်လေ့လာပါ ဘို့ ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် US in US ရှိတက္ကသိုလ် သို့ ယူအက်စ်တွင်လေ့လာသည် ဘို့ ယူအက်စ်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု in ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိတက္ကသိုလ် သို့ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်လေ့လာပါ ဘို့ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် California in ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတက္ကသိုလ် သို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်လေ့လာသည် ဘို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေး, ဝင်ခွင့် California in ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတက္ကသိုလ် သို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်လေ့လာသည် ဘို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေး, ဝင်ခွင့် New York in နယူးယောက်ရှိတက္ကသိုလ် သို့ နယူးယောက်၌လေ့လာပါ ဘို့ နယူးယောက်ရှိပညာရေး, ဝင်ခွင့် Austin in Austin အတွက်တက္ကသိုလ် သို့ Austin တွင်လေ့လာပါ ဘို့ Austin အတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို in ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိတက္ကသိုလ် သို့ San Francisco မှာလေ့လာပါ ဘို့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအတွက်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် Denver in ဒင်းဗားတက္ကသိုလ် သို့ ဒင်းဗားတွင်လေ့လာသည် ဘို့ ဒင်းဗားပညာရေး, ဝင်ခွင့် အတ္တလန်တာ in အတ္တလန်တာရှိတက္ကသိုလ် သို့ အတ္တလန်တာတွင်လေ့လာပါ ဘို့ အတ္တလန်တာမှာပညာရေး, ဝင်ခွင့် ချီကာဂို in ချီကာဂိုတက္ကသိုလ် သို့ ချီကာဂို၌လေ့လာပါ ဘို့ ချီကာဂိုပညာရေး, ဝင်ခွင့် Kansas in Kansas ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် သို့ Kansas တွင်လေ့လာပါ ဘို့ Kansas ပြည်နယ်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် Orlando တွင် in Orlando တွင်တက္ကသိုလ် သို့ Orlando တွင်လေ့လာသည် ဘို့ Orlando တွင်ပညာရေး, ဝင်ခွင့် Washington in ဝါရှင်တန်ရှိတက္ကသိုလ် သို့ ဝါရှင်တန်ရှိလေ့လာမှု ဘို့ ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေးသင့်အနေဖြင့်အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်။
သင်စီစဉ်ထားလျှင် USA တွင်လေ့လာမှုငါတို့၏ ပြည်ပမှာအတိုင်ပင်ခံ in အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သင့်အတွက်လမ်းပြပေးပါလိမ့်မယ် ယူအက်စ်အေအတွက်ဝန်ခံချက် USA တွင်ပညာသင်ရန်အတွက်သူတို့သည်လည်းအတွေ့အကြုံမျှဝေကြသည် အတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင် US ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း နယူးယောက်ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း Austin အတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ဒင်းဗားရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း အတ္တလန်တာရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း ချီကာဂိုရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း Kansas ပြည်နယ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း Orlando တွင်ကျောင်းသားများဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဝါရှင်တန်ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပါအဝင် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် တွဲဖက် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မင်းကိုကူညီနိုင်တယ် တိုက်ခန်းရှာခြင်း or ဘော်ဒါဆောင် ငှားရန်ရှိသည် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု.
ကျွန်တော်တို့၏ USA တွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ သင့်တော်တဲ့အရာကိုရှာတွေ့နိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ် တက္ကသိုလ် USA တွင်။
ငါတို့အသင်း ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေး သင်လိုအပ်ကောင်းကူညီနိုင်မည့်မည်သည့်အထောက်အပံ့ကိုမဆိုသင့်အားလမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည် ယူအက်စ်အေတွင်လေ့လာပါသင်ချွေတာရန်အတွက်အချိန်နှင့်ကုန်ကျမှု ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေး။
အောင်မြင်သည် အတွက်ဝင်ခွင့် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတွက်လေ့လာနေသည် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမြို့များဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည် US မှာဝင်ခွင့် ဘို့ US မှာလေ့လာနေ, ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ဝင်ခွင့် ဘို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လေ့လာနေ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းဝင်ခွင့် ဘို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်လေ့လာသည်, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းဝင်ခွင့် ဘို့ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်လေ့လာသည်, နယူးယောက်ရှိကျောင်းဝင်ခွင့် ဘို့ နယူးယောက်တွင်လေ့လာသည်, Austin အတွက်ဝင်ခွင့် ဘို့ Austin တွင်လေ့လာနေ, San Francisco မှာဝင်ခွင့် ဘို့ San Francisco မှာလေ့လာနေ, ဒင်းဗားတွင် ၀ င်ခွင့် ဘို့ ဒင်းဗားတွင်ပညာသင်သည်, အတ္တလန်တာအတွက်ဝင်ခွင့် ဘို့ အတ္တလန်တာတွင်လေ့လာသည်, ချီကာဂို၌ဝင်ခွင့် ဘို့ ချီကာဂို၌လေ့လာနေ, Kansas ပြည်နယ်အတွက်ဝန်ခံချက် ဘို့ Kansas ပြည်နယ်မှာလေ့လာနေ, Orlando တွင်ဝင်ခွင့် ဘို့ Orlando တွင်လေ့လာနေသည်, ဝါရှင်တန်ရှိဝန်ခံချက် ဘို့ ဝါရှင်တန်မှာလေ့လာနေ
ရန်စီစဉ်လျှင် USA တွင်လေ့လာမှုထို့နောက်ရွေးစရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည် USA တွင်မိတ်ဖက် ယူအက်စ်အေ၌သင်ဝန်ခံချက်အဘို့, ငါတို့မှာ ထုတ်လုပ်သူသန်း သင်၏အစီအစဉ်များအောင်မြင်ရန်သေချာစေရန်အသင့်ဖြစ်နေသည် လေ့လာချက် USA သို့
သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်၏အဖွဲ့ ယူအက်စ်အေရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ သင့်အတွက်သတင်းပို့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင့်အားပေးပို့ပါလိမ့်မည် USA တွင်ပညာရေးအပါအဝင် ကျောင်းသားဗီဇာ အမေရိကန်နှင့်အတူ ယူအက်စ်အေတွင်နေထိုင်၏ကုန်ကျစရိတ် သင်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ USA တွင်အသုံးစရိတ်များကိုကြိုတင်နားလည်ရန်အတွက် USA တွင်တက္ကသိုလ် လေ့လာရန်သို့မဟုတ် နောက်ထပ်တိုင်းပြည် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပိုကောင်းလိမ့်မယ် အခြားတိုင်းပြည်များကိုစစ်ဆေးပါ, အစား, အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ကူညီပေးပါ စာရွက်စာတမ်းများ ဘို့ USA တွင်တက္ကသိုလ်မှဝန်ခံချက်.
ကြီးကြပ်သည် သင့်အတွက်ဖြစ်စဉ် USA တွင်တက္ကသိုလ်မှဝန်ခံချက်.
US မှာလေ့လာပါ | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လေ့လာပါ | ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်လေ့လာပါ | ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်လေ့လာပါ | နယူးယောက်မှာလေ့လာပါ | Austin တွင်လေ့လာပါ | San Francisco မှာလေ့လာပါ | ဒင်းဗားတွင်လေ့လာပါ | အတ္တလန်တာတွင်လေ့လာပါ | ချီကာဂို၌လေ့လာပါ | Kansas တွင်လေ့လာပါ | Orlando တွင်လေ့လာပါ | ၀ ါရှင်တန်တွင်လေ့လာပါ
ယူအက်စ်အေနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၅ နိုင်ငံအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေးမိတ်ဖက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုရရှိရန်ကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များနှင့် ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်အိမ်တစ်လုံးအောက်၌ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းသားများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
USA တွင်သင်အံမှုပြုရန်အတွက် USA တွင်သီးခြားပြုလုပ်ထားသောပညာရေးကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
ခိုင်မာသောစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ကြားခြင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ၌တရား ၀ င်တက္ကသိုလ်များသာရှိသည်။
USA တွင်ပညာသင်ရန်အတွက် 1 point of contact ကိုလွယ်ကူစွာဖြင့်သင်၏ကျောင်းဝင်ခွင့်ကိုလွယ်ကူစေရန်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည်။
USA တွင်သင်၏ပညာရေးရည်မှန်းချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပူးပေါင်းပါကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုရရှိမည်ဖြစ်သည် USA တွင် mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံအပါအဝင် US ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် နယူးယောက်ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Austin ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဒင်းဗားရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် အတ္တလန်တာရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ချီကာဂိုရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Kansas ပြည်နယ်ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် Orlando တွင် mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ နှင့် ဝါရှင်တန်ရှိ mCare ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အထောက်အပံ့ပေးသောနိုင်ငံ ၁၀၆ နိုင်ငံ ယူအက်စ်အေတွင်လေ့လာပါ သင်အမေရိကန်ကိုပြောင်းရွှေ့သည့်အချိန်တွင်ပထမ ၃ လအတွက်သင့်အားခွဲဝေပေးလိမ့်မည်။ အမေရိကန်အတွက်သင်နှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်မည့်သူ၊ သင်၏ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်သည်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်သေချာစေရန်၊ အမေရိကန်ရှိအဆောင် / တိုက်ခန်း၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်အတွက် USA, အားလုံးသည်သင့်ကိုနားလည်ပြီး USA မှအချိန်၊ ငွေနှင့်အားထုတ်မှုများကိုသက်သာစေမည့်သူတစ် ဦး တည်းကစောင့်ရှောက်သည်
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားကျောင်းသား ကိုလိုက်ရှာသည် ယူအက်စ်အေအတွက်ဝန်ခံချက်တစ်ဦးအတွက် တက္ကသိုလ် or USA တွင်ကောလိပ်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာ ယူအက်စ်အေရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, အထူးထောက်ခံမှုပေးနိုင်ပါသည်။
USA တွင်သင်၏ဝန်ခံချက်အတွက်လက် Holding
USA တွင်သင်၏ ၀ င်ခွင့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှု
ငါတို့သည်သင်တို့ကို USA နှင့်နိုင်ငံပေါင်း 105 အတွက်အခြားတက္ကသိုလ်များကိုပေး။
ယူအက်စ်ရှိ One Stop Shop နှင့်ပညာရေးအတွက်နိုင်ငံ ၁၀၆ ခု
ယူအက်စ်အေရှိနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသော ၀ န်ဆောင်မှုများ။ အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဘို့ထွက်ရောက်ရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ USA စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာရေးအဖွဲ့သည်အမေရိကန်၌သင်လိုအပ်သောမည်သည့်အထောက်အပံ့မဆိုကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်လုံ့လဝီရိယရှိရှိကျွမ်းကျင်မှုများစွာရှိသည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - USA သို့ပညာရေး
USA မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ USA မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်ယူအက်စ်မှကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံများကအမေရိကန်မှတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်အတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုမည်ကဲ့သို့ပေးမည်နည်း။
ယူအက်စ်အေ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံကထောက်ပံ့ပေး USA မှပညာရေးအတိုင်ပင်ခံလည်းအဖြစ်လူသိများ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် USA ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေနိုင်ငံခြားရေးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေနိုင်ငံခြားရေးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေ၏နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေ၏ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏လေ့လာမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏နိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်၏အတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်၏အတိုင်ပင်ခံ၊ ယူအက်စ်အေ၏အတိုင်ပင်ခံ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ကြားခြင်းသည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ပညာသင်ခြင်းနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ပညာသင်ခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ USA အတွက်နိုင်ငံခြားအစီအစဉ်များနှင့်မည်မျှကွာခြားသနည်း။
ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်ရရန် ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားပါ, ဘယ်လိုရရန် ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ , ယူအက်စ်အေ ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်လျှောက်ထားပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ရယူရန် ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ယူအက်စ်အေ ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, ယူအက်စ်ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, ယူအက်စ်ကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲအချိန်။ ပြောပါ ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ USA အတွက် ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, US မှာနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, US ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ယူအက်စ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, US မှာနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ယူအက်စ်အေအတွက်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံများ၊ အမေရိကန်ရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ယနေ့အမေရိကန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ယူနိုက်တက်စတိတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ယူနိုက်တက်စတိတ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူနိုက်တက်စတိတ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူနိုက်တက်စတိတ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံများ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ယနေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပမှာကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံခြားကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံများ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပမှာကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံခြားကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံများ၊ နယူးယောက်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, နယူးယောက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နယူးယောက်အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နယူးယောက်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , နယူးယောက်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နယူးယောက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နယူးယောက်ရှိပြည်ပတွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နယူးယောက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နယူးယောက်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နယူးယောက်ရှိပြည်ပရောက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နယူးယောက်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , နယူးယောက်ရှိအတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ နယူးယောက်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့်နယူးယောက်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ Austin များအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, Austin အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Austin အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Austin အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Austin အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Austin အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Austin အတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Austin အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Austin အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Austin အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Austin အတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Austin အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Austin အတွက်လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ , Austin ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Austin ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Austin ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံပညာရေး, Austin ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ, Austin ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့် Austin ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, San Francisco မှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, San Francisco ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , San Francisco မှာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, San Francisco မှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, San Francisco မှာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပြည်ပတွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , San Francisco မှာလေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ San Francisco ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ။ ဒင်းဗားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဒင်းဗားပညာရေးအကြံပေး, Denver ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဒင်းဗားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဒင်းဗားအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Denver ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံဒင်းဗား, ဒင်းဗားအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Denver ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဒင်းဗားအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Denver ရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဒင်းဗားအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဒင်းဗားတွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , Denver ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Denver ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Denver ရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Denver ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ, Denver ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့် Denver ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ။ အတ္တလန်တာအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, အတ္တလန်တာရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အတ္တလန်တာအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အတ္တလန်တာရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , အတ္တလန်တာအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, အတ္တလန်တာအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံခြားအတ္တလန်တာရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အတ္တလန်တာရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အတ္တလန်တာအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အတ္တလန်တာအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, အတ္တလန်တာအတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အတ္တလန်တာအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , အတ္တလန်တာတွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ Atlanta ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Atlanta ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Atlanta ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ Atlanta ရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ Atlanta ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့် Atlanta ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ ချီကာဂိုအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ချီကာဂိုရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ချီကာဂိုအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ချီကာဂိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ချီကာဂိုအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ချီကာဂိုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ပြည်ပမှာချီကာဂိုမှာရှိတဲ့ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ချီကာဂိုအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ချီကာဂိုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ချီကာဂိုအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ချီကာဂို၌ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ချီကာဂိုအတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ချီကာဂို၌အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ ချီကာဂိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှချီကာဂိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိပြည်ပရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ချီကာဂိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ Kansas ပြည်နယ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, Kansas ပြည်နယ်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Kansas ပြည်နယ်အတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Kansas ပြည်နယ်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Kansas ပြည်နယ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Kansas ပြည်နယ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Kansas ပြည်နယ်အတွက်ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Kansas ပြည်နယ်အတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Kansas ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Kansas ပြည်နယ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Kansas ရှိပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Kansas ပြည်နယ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Kansas တွင်လေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ Kansas ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပြည်ပရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပြည်ပရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပြည်ပပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့် Kansas ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ Orlando တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, နိုင်ငံခြားမှာ Orlando တွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်နိုင်ငံခြားမှပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , Orlando တွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ , Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Orlando ရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်နိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ, Orlando တွင်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့် Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ ဝါရှင်တန်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဝါရှင်တန်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဝါရှင်တန်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဝါရှင်တန်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဝါရှင်တန်ရှိပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဝါရှင်တန်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ဝါရှင်တန်ရှိပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ဝါရှင်တန်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ , ဝါရှင်တန်ရှိအတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြည်ပမှ ၀ ါရှင်တန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဝါရှင်တန်ရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံ၊ ဝါရှင်တန်ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံနှင့် ၀ ါရှင်တန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ အမေရိကန်အတွက်အမေရိကန်အတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ရှိနိုင်ငံခြားမှအကြံပေးများ၊ ဒီနေ့အမေရိကန်မှာ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ , အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလေ့လာမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ကြားနေသောအတိုင်ပင်ခံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ယနေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒီနေ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒီနေ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ နယူးယောက်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအကြံပေး၊ နယူးယောက်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိလေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ယူခြင်း၊ နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့်နယူးယောက်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများယနေ့ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ Austin ရှိအတိုင်ပင်ခံကျောင်းသား၊ Austin မှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Austin ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Austin ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Austin ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Austin ရှိကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ Austin ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Austin ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Austin ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပညာရေး Austin ရှိနိုင်ငံခြားအတတ်ပညာဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Austin ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Austin အတွက်အတိုင်ပင်ခံ၊ Austin တွင်လေ့လာမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Austin ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Austin ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Austin ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, Austin ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့် Austin ၏နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ Austin ယနေ့။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ San Francisco ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပြည်ပရောက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ , ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိနိုင်ငံခြားမှပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပြည်ပတွင်အတိုင်ပင်ခံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ယနေ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ ဒင်းဗားပညာရေးအကြံပေး၊ ဒင်းဗားပညာရေးအကြံပေး၊ ဒင်းဗားနိုင်ငံခြားပညာရေးအကြံပေး၊ ဒင်းဗားပညာရေးအကြံပေး၊ ဒင်းဗားပညာရေးအကြံပေး၊ ဒင်းဗား၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြည်ပဒိန်းဗားပညာရေးအကြံပေး၊ ဒင်းဗားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Denver ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Denver ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒင်းဗားတွင်ကျောင်းသား၏အတိုင်ပင်ခံ၊ ဒင်းဗားတွင်လေ့လာမှုဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း၊ ဒင်းဗား၌ပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်း၊ Denver ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Denver ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒင်းဗားရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအကြံပေးများ၊ ယနေ့ Denver ၌တည်၏။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ အတ္တလန်တာ၏အတိုင်ပင်ခံကျောင်းသား၊ အတ္တလန်တာ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အတ္တလန်တာတွင်နိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အတ္တလန်တာရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ အတ္တလန်တာတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အတ္တလန်တာ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်အတ္တလန်တာ၌ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အတ္တလန်တာတွင်နိုင်ငံခြားအတိုင်ပင်ခံ၊ အတ္တလန်တာ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အတ္တလန်တာ၏အတိုင်ပင်ခံ၊ အတ္တလန်တာတွင်လေ့လာမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အတ္တလန်တာတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ အတ္တလန်တာ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ဒီနေ့အတ္တလန်တာမှာ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ ချီကာဂိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိပြည်ပပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုတွင်အတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားချီကာဂိုတွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိနိုင်ငံခြားမှအတိုင်ပင်ခံ၊ ချီကာဂိုရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ ဒီနေ့ချီကာဂိုမှာ။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ Kansas ပြည်နယ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိကမ္ဘာပညာရေးရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ပြည်ပရှိ Kansas ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ပြည်နယ်ရှိအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိလေ့လာမှုအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Kansas ပြည်နယ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ ယနေ့ Kansas ပြည်နယ်၌တည်၏။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။ Orlando တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando ရှိနိုင်ငံခြားပညာရေးဆိုင်ရာအကြံပေး၊ Orlando ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando ရှိကမ္ဘာ့ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် Orlando ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando တွင်လေ့လာမှုဆိုင်ရာအကြံပေးမှု၊ Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် Orlando ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Orlando ရှိနိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအကြံပေးများ၊ ယနေ့ Orlando တွင်။ ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ၊ ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံကိုပြောပါ။
ဘာဖြစ်သလဲ LivingUSA ၏ကုန်ကျစရိတ် or လူနေမှုဂဏန်းတွက်စက် USA ၏ကုန်ကျစရိတ် , ကျောင်းသားများအတွက်ယူအက်စ်အေတွင်နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင် အိန္ဒိယကျောင်းသားများအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ပါကစ္စတန်ကျောင်းသားများအတွက်ယူအက်စ်အေတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်, ယူအက်စ်တွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်မှုစရိတ်, အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားများအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် or အမေရိကန်မှအာဖရိကမှကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်?
ကျနော်တို့အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ ယူအက်စ်အေများအတွက်လူနေမှုတွက်ချက်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ပါဝင်သည် ယူအက်စ်အေတွင်နေထိုင်၏ကုန်ကျစရိတ်, ယူအက်စ်အေ၏လူနေမှုဂဏန်းတွက်စက်၏ကုန်ကျစရိတ်, ကျောင်းသားများအတွက်ယူအက်စ်အေတွင်နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အလွန်အခြေခံကျသည် ယူအက်စ်အေအတွက်သတင်းအချက်အလက်နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်.
ယူအက်စ်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်နေထိုင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ် | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိလူနေမှုစရိတ် | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိလူနေမှုစရိတ် | နယူးယောက်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | Austin တွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ဒင်းဗားတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | အတ္တလန်တာတွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ချီကာဂိုတွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | Kansas ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ် | Orlando တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ဝါရှင်တန်တွင်နေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ် | ယူအက်စ်တွင်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူနေမှုဘဝတွက်ချက်မှု | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | နယူးယောက်ရှိလူနေမှုကုန်ကျစရိတ် | Austin တွင်နေထိုင်သောတွက်ချက်မှုနှုန်း | San Francisco ရှိလူနေမှုစရိတ်တွက်ချက်မှု | နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် Denver တွင်နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | အတ္တလန်တာတွင်နေထိုင်သောတွက်ချက်မှုပုံစံ | ချီကာဂိုရှိလူနေမှုကုန်ကျစရိတ် | Kansas ပြည်နယ်ရှိနေထိုင်မှုတွက်ချက်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ် | Orlando တွင်နေထိုင်သည့်တွက်ချက်မှုနှုန်း | ဝါရှင်တန်ရှိလူနေမှုကုန်ကျစရိတ်
အမေရိကန်၊ တက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့်စာမေးပွဲ၊ အမေရိကန်၊ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် ၀ င်ခွင့်အမေရိကန်၊ ၀ င်ခွင့်ယူ၊ ယူအက်စ်၊ ဆေး ၀ င်ခွင့်ယူအက်စ်အေ၊ MBBS ၀ င်ခွင့်ယူ၊ ယူအက်စ်၊ , အမေရိကန်သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်အမေရိကန်၊ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်အထောက်အပံ့အမေရိကန်၊ ကောလိပ်ဝင်ခွင့် USA
ကျွန်တော်တို့၏ ယူအက်စ်အေအတွက်အသိအမှတ်ပြုကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အဘို့သင့်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး USA တွင်ဝင်ခွင့် သင်၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည် စီးပွားရေးသင်တန်းဝန်ခံချက် USA, mba ဝန်ခံချက်အမေရိကန်နိုင်ငံ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်ခံအမေရိကန်, ယူအက်စ်အေသင်တန်းမာစတာများအတွက်ဝန်ခံချက်, အမေရိကန်ကောလိပ်ဝင်ခွင့်အထောက်အပံ့, ဝန်ခံချက်လိုအပ်ချက်များကို USA, ယူအက်စ်, ယူအက်စ်အေဘွဲ့သင်တန်းတက်ရောက်ရန်, MBBS ဝန်ခံချက် USA, ကောလိပ်ဝင်ခွင့်အမေရိကန်, ဝင်ခွင့်များ USA, ကောလိပ်ဝန်ခံချက်အကူအညီ USA, ကောလိပ်ဝင်ခွင့်အမေရိကန် နှင့် ပွင့်လင်းအမေရိကန်နိုင်ငံ.
ကျွန်ုပ်သည် USA တွင်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။ အမေရိကန်ရှိအွန်လိုင်းပညာရေးကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
အလိုလျှင် ယူအက်စ်အေအတွက်တက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု ယူအက်စ်အေတွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or ယူအက်စ်အေအတွက်အွန်လိုင်းပညာရေး or ယူအက်စ်အေအတွက်အွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် ယူအက်စ်အေများအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ငါတို့ဆက်သွယ်ပါ USA တွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, ယူအက်စ်အေအတွက်နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ
ယူအက်စ်အေရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများအတွက် ၀ င်ခွင့်အတွက်ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးသလား။ အမေရိကန်မှာအွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားလို့ရမလား၊ အမေရိကန်မှာအွန်လိုင်းပညာရေးကိုလျှောက်ထားလို့ရလား။
အလိုလျှင် ယူအက်စ်အေအတွက်တက္ကသိုလ် ခွင့်ပြု ယူအက်စ်အေတွင်အွန်လိုင်းဝင်ခွင့် or ယူအက်စ်အေအတွက်အွန်လိုင်းပညာရေး or ယူအက်စ်အေအတွက်အွန်လိုင်းသင်တန်းများထို့နောက် ယူအက်စ်အေများအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ထောက်ပံ့နိုင်လိမ့်မည်။ "
ယူအက်စ်တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | နယူးယောက်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | Austin တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ဒင်းဗားတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | အတ္တလန်တာတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ချီကာဂိုရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | Kansas ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | Orlando တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ဝါရှင်တန်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်းများ | ယူအက်စ်တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း | နယူးယောက်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း | Austin အတွက်အွန်လိုင်းသင်တန်း | ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | ဒင်းဗားတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | အတ္တလန်တာတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | ချီကာဂိုတွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | Kansas တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | Orlando တွင်အွန်လိုင်းသင်တန်း | ဝါရှင်တန်ရှိအွန်လိုင်းသင်တန်း
ဘို့ ဝင်ခွင့်ပေးခြင်း တစ်ဦးအတွက် USA တွင်တက္ကသိုလ်, USA ရှိပညာရေး ဦး စီးဌာန or ယူအက်စ်အေပညာရေးဝန်ကြီးဌာန များအတွက်အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ပေးပါသည် ယူအက်စ်ရှိနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများအတွက် ၀ င်ခွင့်, ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ ကက ယူအက်စ်အေရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းပေးလိမ့်မည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပမှာလေ့လာပါ or ယူအက်စ်အေတွင်လေ့လာပါ။ ဒါ့အပြင်၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုကြည့်ပါ ပညာရေးဦးစီးဌာနအမေရိကန် / ဝက်ဘ်ဆိုက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန, ယူအက်စ်အေ။
US တွင်လေ့လာပါ | အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လေ့လာပါ | ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်လေ့လာပါ | ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်လေ့လာပါ | နယူးယောက်မှာလေ့လာပါ | Austin တွင်လေ့လာပါ | San Francisco မှာလေ့လာပါ | ဒင်းဗားတွင်လေ့လာပါ | အတ္တလန်တာတွင်လေ့လာပါ | ချီကာဂို၌လေ့လာပါ | Kansas တွင်လေ့လာပါ | Orlando တွင်လေ့လာပါ | ဝါရှင်တန်မှာလေ့လာပါ | အမေရိကန်တွင်ကျောင်းပိတ်ရက် | ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | နယူးယောက်ရှိနိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | Austin အတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | San Francisco မှာပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ဒင်းဗားတွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | အတ္တလန်တာတွင်ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | ချီကာဂို၌ပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Kansas ရှိပြည်ပမှာလေ့လာပါ | Orlando တွင်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ပါ | ဝါရှင်တန်ရှိပြည်ပမှာလေ့လာပါ
ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ကျောင်းသားဗီဇာမည်ကဲ့သို့လျှောက်ရမည်နည်း။ အမေရိကန်ကျောင်းသားဗီဇာစည်းကမ်းများ၊ အမေရိကန်ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်၊
လျှောက်ထားရန်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန် ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ဘယ်လိုရရန် ယူအက်စ်အတွက်ကျောင်းသားဗီဇာ, ယူအက်စ်ကျောင်းသားဗီဇာလုပ်ငန်းစဉ်, ယူအက်စ်ကျောင်းသားဗီဇာစည်းမျဉ်းများ, ယူအက်စ်ကျောင်းသားဗီဇာအပြောင်းအလဲ အချိန်အဆက်အသွယ် ယူအက်စ်အေအတှကျကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ.
ကျနော်တို့များအတွက်စည်းမျဉ်းများစာရင်းပြုစုပါပြီ ယူအက်စ်ရှိကျောင်းသားများအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့် အပေါ်က ယူအက်စ်အေကျောင်းသားအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် or ယူအက်စ်ကျောင်းသားဗီဇာဝန်ခံချက်အပြီးအလုပ်လုပ်ခွင့် USA တွင်တက္ကသိုလ်၌တည်၏။ အဖြစ်လူသိများ, ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတှကျကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, education consultant in USA, education consultancy in USA, foreign education consultants in USA, study abroad consultants in USA, abroad education consultant in USA, student consultant for USA, education Consultancy in USA, study consultancy in USA, abroad education consultants in USA, educational consultancy in USA, global educational consultants in USA, education consultant in US, educational consultancy in US, educational consultant in US, foreign education consultants in US, student consultants for US, abroad education consultant in US, overseas educational consultants in US, university consultancy in US, student Consultants in US, abroad education consultants in US, education consultancy in US, foreign education consultancy in US, study consultancy in US, educational Consultants in US, study abroad consultants in US, abroad education consultants in US, global educational consultants in US, education consultants in US, student consultant for US, educational consultancy in US education consultant in United States, educational consultancy in United States, educational consultant in United States, foreign education consultants in United States, student consultants for United States, abroad education consultant in United States, overseas educational consultants in United States, university consultancy in United States, student Consultants in United States, abroad education consultants in United States, education consultancy in United States, foreign education consultancy in United States, study consultancy in United States, educational Consultants in United States, study abroad consultants in United States, abroad education consultants in United States, global educational consultants in United States, education consultants in United States, student consultant for United States, educational consultancy in United States education consultant in California, educational consultancy in California, educational consultant in California, foreign education consultants in California, student consultants for California, abroad education consultant in California, overseas educational consultants in California, university consultancy in California, student Consultants in California, abroad education consultants in California, education consultancy in California, foreign education consultancy in California, study consultancy in California, educational Consultants in California, study abroad consultants in California, abroad education consultants in California, global educational consultants in California, education consultants in California, student consultant for California, educational consultancy in California education consultant in California, educational consultancy in California, educational consultant in California, foreign education consultants in California, student consultants for California, abroad education consultant in California, overseas educational consultants in California, university consultancy in California, student Consultants in California, abroad education consultants in California, education consultancy in California, foreign education consultancy in California, study consultancy in California, educational Consultants in California, study abroad consultants in California, abroad education consultants in California, global educational consultants in California, education consultants in California, student consultant for California, educational consultancy in California education consultant in New York, educational consultancy in New York, educational consultant in New York, foreign education consultants in New York, student consultants for New York, abroad education consultant in New York, overseas educational consultants in New York, university consultancy in New York, student Consultants in New York, abroad education consultants in New York, education consultancy in New York, foreign education consultancy in New York, study consultancy in New York, educational Consultants in New York, study abroad consultants in New York, abroad education consultants in New York, global educational consultants in New York, education consultants in New York, student consultant for New York, educational consultancy in New York education consultant in Austin, educational consultancy in Austin, educational consultant in Austin, foreign education consultants in Austin, student consultants for Austin, abroad education consultant in Austin, overseas educational consultants in Austin, university consultancy in Austin, student Consultants in Austin, abroad education consultants in Austin, education consultancy in Austin, foreign education consultancy in Austin, study consultancy in Austin, educational Consultants in Austin, study abroad consultants in Austin, abroad education consultants in Austin, global educational consultants in Austin, education consultants in Austin, student consultant for Austin, educational consultancy in Austin education consultant in San Francisco, educational consultancy in San Francisco, educational consultant in San Francisco, foreign education consultants in San Francisco, student consultants for San Francisco, abroad education consultant in San Francisco, overseas educational consultants in San Francisco, university consultancy in San Francisco, student Consultants in San Francisco, abroad education consultants in San Francisco, education consultancy in San Francisco, foreign education consultancy in San Francisco, study consultancy in San Francisco, educational Consultants in San Francisco, study abroad consultants in San Francisco, abroad education consultants in San Francisco, global educational consultants in San Francisco, education consultants in San Francisco, student consultant for San Francisco, educational consultancy in San Francisco education consultant in Denver, educational consultancy in Denver, educational consultant in Denver, foreign education consultants in Denver, student consultants for Denver, abroad education consultant in Denver, overseas educational consultants in Denver, university consultancy in Denver, student Consultants in Denver, abroad education consultants in Denver, education consultancy in Denver, foreign education consultancy in Denver, study consultancy in Denver, educational Consultants in Denver, study abroad consultants in Denver, abroad education consultants in Denver, global educational consultants in Denver, education consultants in Denver, student consultant for Denver, educational consultancy in Denver education consultant in Atlanta, educational consultancy in Atlanta, educational consultant in Atlanta, foreign education consultants in Atlanta, student consultants for Atlanta, abroad education consultant in Atlanta, overseas educational consultants in Atlanta, university consultancy in Atlanta, student Consultants in Atlanta, abroad education consultants in Atlanta, education consultancy in Atlanta, foreign education consultancy in Atlanta, study consultancy in Atlanta, educational Consultants in Atlanta, study abroad consultants in Atlanta, abroad education consultants in Atlanta, global educational consultants in Atlanta, education consultants in Atlanta, student consultant for Atlanta, educational consultancy in Atlanta education consultant in Chicago, educational consultancy in Chicago, educational consultant in Chicago, foreign education consultants in Chicago, student consultants for Chicago, abroad education consultant in Chicago, overseas educational consultants in Chicago, university consultancy in Chicago, student Consultants in Chicago, abroad education consultants in Chicago, education consultancy in Chicago, foreign education consultancy in Chicago, study consultancy in Chicago, educational Consultants in Chicago, study abroad consultants in Chicago, abroad education consultants in Chicago, global educational consultants in Chicago, education consultants in Chicago, student consultant for Chicago, educational consultancy in Chicago education consultant in Kansas, educational consultancy in Kansas, educational consultant in Kansas, foreign education consultants in Kansas, student consultants for Kansas, abroad education consultant in Kansas, overseas educational consultants in Kansas, university consultancy in Kansas, student Consultants in Kansas, abroad education consultants in Kansas, education consultancy in Kansas, foreign education consultancy in Kansas, study consultancy in Kansas, educational Consultants in Kansas, study abroad consultants in Kansas, abroad education consultants in Kansas, global educational consultants in Kansas, education consultants in Kansas, student consultant for Kansas, educational consultancy in Kansas education consultant in Orlando, educational consultancy in Orlando, educational consultant in Orlando, foreign education consultants in Orlando, student consultants for Orlando, abroad education consultant in Orlando, overseas educational consultants in Orlando, university consultancy in Orlando, student Consultants in Orlando, abroad education consultants in Orlando, education consultancy in Orlando, foreign education consultancy in Orlando, study consultancy in Orlando, educational Consultants in Orlando, study abroad consultants in Orlando, abroad education consultants in Orlando, global educational consultants in Orlando, education consultants in Orlando, student consultant for Orlando, educational consultancy in Orlando education consultant in Washington, educational consultancy in Washington, educational consultant in Washington, foreign education consultants in Washington, student consultants for Washington, abroad education consultant in Washington, overseas educational consultants in Washington, university consultancy in Washington, student Consultants in Washington, abroad education consultants in Washington, education consultancy in Washington, foreign education consultancy in Washington, study consultancy in Washington, educational Consultants in Washington, study abroad consultants in Washington, abroad education consultants in Washington, global educational consultants in Washington, education consultants in Washington, student consultant for Washington, educational consultancy in Washington . USA တွင်အကောင်းဆုံးပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်အမေရိကန်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံများအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ ယူအက်စ်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or US ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ or အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ or ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ or ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ နယူးယောက်ရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ or နယူးယောက်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ Austin အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or Austin ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ Denver ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ဒင်းဗားရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ အတ္တလန်တာရှိပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ or အတ္တလန်တာရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ချီကာဂိုရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ချီကာဂိုရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ Kansas ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or Kansas ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ Orlando တွင်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or Orlando တွင်ကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ဝါရှင်တန်ရှိပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ or ဝါရှင်တန်ရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံ ?
ဤရွေ့ကားများအတွက်အသုံးပြုကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည် ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေရှိကျောင်းသားအတိုင်ပင်ခံအခြားအသုံးအနှုန်းများမှာ ယူအက်စ်အေအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, USA တွင်အတိုင်ပင်ခံလေ့လာပါ, ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်နိုင်ငံခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်နိုင်ငံရပ်ခြားပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, ယူအက်စ်အေအတွက်တက္ကသိုလ်အတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြည်ပမှာပညာရေးအတိုင်ပင်ခံ
ပညာရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် USA တွင်
၀ င်ခွင့်အတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
ယူအက်စ်တက္ကသိုလ်မှ ၀ င်ခွင့် ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတက္ကသိုလ် ၀ င်ခွင့် နယူးယောက်ရှိတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် Austin အတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် | ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိတက္ကသိုလ်မှ ၀ င်ခွင့် ဒင်းဗားတက္ကသိုလ်မှ ၀ င်ခွင့် | အတ္တလန်တာတက္ကသိုလ်၌ ၀ င်ခွင့် ချီကာဂိုရှိတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် | Kansas ရှိတက္ကသိုလ်မှဝင်ခွင့် | Orlando တွင်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် | ဝါရှင်တန်ရှိတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်
Bard College မှာ
Barnard College မှာ
ခရစ်တော်ဘုရင် Seminary မှာ
Medger Evers ကောလိပ်
နယူး Rochelle ၏ကောလိပ်
Concordia ကောလိပ် -Bronxville
အမေရိက၏အချက်အပြုတ် Institute က
ဟီဘရူးပြည်ထောင်စုကောလိပ် - ဂျူးဘာသာရေးဌာန
Houghton College မှာ
အဆိုပါ Juilliard ကျောင်း
le Moyne ကောလိပ်
Long Island တွင်တက္ကသိုလ်
နယူးယောက် Chiropractic ကောလိပ်
Auburn University က
Montgomery မှာ Auburn University က
ဘာမင်ဂမ်အဘိဓါန် Southern ကောလိပ်
Concordia ကောလိပ် -Selma
DeVry တက္ကသိုလ် - အော်လန်ဒို
နည်းပညာတက္ကသိုလ်ဖလော်ရီဒါ Institute က
ဖလော်ရီဒါ Metropolitan တက္ကသိုလ်
အနုပညာ - ချီကာဂို၏အီလီနွိုက်စ Institute က
Art-Schaumburg ၏အီလီနွိုက်စ Institute က
အီလီနွိုက်စ Wesleyan တက္ကသိုလ်
အဆိုပါအနုပညာကယ်လီဖိုးနီးယား Institute က
ပေါင်းစည်းထားလေ့လာရေးကယ်လီဖိုးနီးယား Institute က
ကယ်လီဖိုးနီးယား Polytechnic State University, San Luis Obispo
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Polytechnic တက္ကသိုလ်, Pomona
နည်းပညာတက္ကသိုလ်က New York Institute က
ဒီဇိုင်း၏ Parsons ကျောင်း
Paul Smith ရဲ့ကောလိပ်
နယူးယောက် Polytechnic တက္ကသိုလ်
Pratt Institute က
Rensselaer Polytechnic Institute က
ရောဘတ် Wesleyan ကောလိပ်
နည်းပညာတက္ကသိုလ် Rochester Institute က
Kansas ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် - လေလိုင်းနည်းပညာနှင့်လေကြောင်းကောလိပ်
Kansas ပြည်နယ် Wesleyan တက္ကသိုလ်
MidAmerica Nazarene ကောလိပ်
အဆိုပါ Sage ကောလိပ်များ
စိန့် Scholastica ၏ကောလိပ်
Concordia ကောလိပ် -Morhead
Gustavus Adolphus ကောလိပ်
လူသာ Seminary မှာ
ဆေးပညာ Mayo ဆေးခန်းကောလိပ်
အနုပညာ & ဒီဇိုင်း၏ Minneapolis ကောလိပ်
မင်နီဆိုတာပြည်နယ်ကောလိပ် & တက္ကသိုလ်စနစ်
Oak Hills ခရစ်ယာန်ကောလိပ်
Imp ။ အင်ဖို - ကျွန်ုပ်တို့သည်လင့်ခ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ယူအက်စ်အေပညာရေး ဦး စီးဌာန / အမေရိကန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မည်သည့်တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုသည်။